Ndiani haadi kuponesa mari kana zvichibvira, kunyanya pazororo? Kuenda kunogona kudhura, asi vatenge kwako nechitima tikiti chete Save A Train uye kuronga achibatsirwa yedu, unogona kuuya pasi madhuriro. Chengetedza mari pavaifamba pamwe izvi 10 mazano ari yako inotevera pazororo uye wako chikwama kuchaita kukutendai.
nguva yakawanda sei here iwe kuenda kupedza mukati mumba mako? Uchaita chete kuva vakarara ipapo? Ko unofanira pane kamuri yaiva zvakanaka maonero kana zvikuru zvimwe nzvimbo? iwe achashandisa Amenities, akadai mudziva kana gym kamuri? Ngatitaurei kuva vakatendeseka, mazororo haasi ekuda kukwana! Saka bhuku kamuri rako akazochena uye kuchengetedza mari pavaifamba.
Tinoda nonoka kufamba. Chokwadi, zvakarurama ... tinoda zvinovaka kufamba. Panzvimbo mijaho kubva kumugumo mumwe munhu nyika kune imwe, kana kubvisa kuburikidza 6 nyika 6 mavhiki, kuziva nharaunda uri, tsime. Achienda chitima ndiyo nzira yakanakisisa yokuita izvi, sezvo uine nguva kutora zvose nzvimbo uye mifananidzo paunenge kuenda. Kunze mufaro kuushandisa nyore, basa Vols vakawandisa, bhazi nzendo, uye kutyaira madaro marefu unogona here kuchandidyira bhajeti yenyu. Saka zvishoma, tora zvakawanda, uye uwane zvese zvinotonhorera zvemahara.
Chengetedza mari pavaifamba napo "Vade" chaunofarira kufamba nzvimbo on Facebook uye "vatevere" pa Twitter. Nguva yakawanda zvakajairika kuti makambani kufamba kusunungura inopisa zveefa zvakananga kuburikidza yavo mumagariro nevezvenhau migero.
Deal Base - Saina yavo yemahara dhizaini chenjedzo. Vane inotaura unadvertised rokutengesa uye inopa hamungambovi kuwana kumwe.
Apartments ndiyo BOMB yemhuri kana avo kutsvaka mamwe mhenyu nzvimbo uye kicheni saka unogona kuponesa pasi chikafu. Airbnb ndizvo nzira yakanaka yekuwana yakachipa-kudhura emahotera emahotera uye sublet kubva kune vemo mu 180 nyika.
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Tips kuchengetedza mari pavaifamba” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-save-money-traveling%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
budgettravel europetravel mari ekuchengetedza mari Chengetedza mari chitima mazano traveltips